Ixesha lokuFunda: 9 imizuzu
Ukuhamba ngololiwe yindlela elula kwaye ye-Eco-Friendly Way yokuHamba. Thi sihloko kubhalwe ukuba afunde Train Travel ngu Gcina A Isitimela, Amatikiti amaxabiso aphantsi Iwebhusayithi kwiHlabathi.
Iifoto ezikwi-Intanethi azenzi bulungisa kwi umlingo Cinque Terre kwingingqi e-Itali. Izindlu ezinemibalabala encotsheni yeenduli, ujikelezwe zizidiliya, indawo yokutyela yasekhaya, yaye bentaba, Zonke zenza lo mmandla ube ngumkhenkethi omangalisayo wokuhamba oya eYurophu. Cinque Terre eneneni iqulethe 8 iilali ezincinci kwaye uloliwe kaloliwe unxibelelanisa zonke omnye komnye. Oku kwenza ukuba kube lula ngakumbi ukutyelelwa nganye yeelali ezikuyo 2-3 iintsuku ukuba ufutshane ngexesha. Yintoni enokuba ngcono kunokuba uloliwe ngokutsiba kwenye yezona ndawo zibalulekileyo eYurophu ekwindla?
Ungachitha 4 iintsuku zokuhlola iilali kunye nokuchitha impelaveki kwisixeko saseLa Spezia, indawo yakho yokuqalisa yokuhamba ngololiwe eCinque Terre. Isuka eLa Spezia, uqeqesha ukuya nakwezinye iilali ozithandayo.
I-Old Town yaseMarktplatz kunye nenqaba yewotshi sisiqalo esihle sokufumana ubugcisa beGothic. Ungaqhubeka kwiholo entle yeDolophu, Isakhiwo esikhulu-njengebhotwe elijonge ichibi. Imihlaba eluhlaza kunye nemithi ejikeleze isigodlo esihle kwaye agqibezela ubume obuhle kwaye ajonge ngemibala yegolide.
I-Hannover yenye yeempawu zeJamani kwaye ayinakuba yinto enhle ekwindla. Ukuba ucwangcisa iholide yokuwa kwiYurophu, emva koko iHannover yeyona ndawo ifanelekileyo yokuhamba. Ababaninzi abakhenkethi abaye bafumana umlingo wayo okwangoku, njalo, ungangowokuqala ukuba nexesha lobomi bakho esixekweni.
IRissbachtal Valley kunye Ipaki yeKarwendel Alpine, Indawo entle yokundwendwela e-Austria ikhefu lekhefu. Indawo yeAlpine yeAhornboden ine 2,000 Iminyaka emide yeSycamore-Maple ijongeka imangalisa ekwindla yayo yengubo yegolide kunye neorenji. Indalo kunye neentaba zenza indawo entle kakhulu yokuwa kwindawo ekhumbulekayo eYurophu.
IAmsterdam sisixeko esimangalisayo leholide eYurophu, nge 50 iimyuziyam kwisixeko, ekhwela umkhumbi kwimigodi, zininzi izinto ezintle omele uzenze kolu hlobo lokuhamba olumangalisayo oluya eNetherlands. Ukwengeza, kukho iipaki ezimangalisayo apho ungaba nepikniki okanye ngebhayisekile xa imozulu intle.
Iigadi kunye neemboniselo ezininzi zinika umbono ophefumulayo womzi wonke kunye nezi zijikeleze wona. ekwindla iimbono zintle kakhulu kwimibala e-autumnal. ke, ngelixa iLuxembourg sesona sixeko sikhulu eYurophu, imi ngokuzingca ecaleni kweedolophu ezinkulu ezinjengeParis. Ngokuqinisekileyo kufanelekile ukukhetha iLuxembourg ngeholide yakho eYurophu ekwindla.
Enkosi kwiinkonzo zesiporo eziphambili, ungahamba naphi na eYurophu ngaphandle kwexesha. Ukusuka kwisixeko esikhulu sommandla wonke ukuya kwisixeko esincinci kunye esimangalisayo, yonke imizi kwiyethu 10 iidolophu eziphambili zeholide yokuwa eYurophu, has its unique charm and magic.
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “10 Eyona Ndawo zintle zokuwa eYurophu” kwi sayithi yakho? Ungakhankanya noba ukuthatha iifoto zethu kunye itekisi asinike ngetyala nge link kule post blog. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-fall-vacations-europe%2F%3Flang%3Dxh ‎- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)